Ịmafe Data si iPhone ka Windows Phone
Method 1: Nyefee Ihe niile n'otu n'otu
Nke a nwere ike ụda na-emenye ụjọ, buts ọ bụ n'ezie adịghị. Ihe niile ị chọrọ bụ obere free oge na aka gị.
Iji nyefee Ndi ana-akpo:
Ọ bụrụ na kọntaktị gị na-synced na akaụntụ email gị, Gmail na akaụntụ maka atụ, ị pụrụ nanị melite na akaụntụ na ọhụrụ gị windows ekwentị na niile kọntaktị gị ga-abụ dị ka ị na ekwentị gị.
Ọ bụrụ na Otú ọ dị, kọntaktị gị na-na iPhone onwe ya, eso ndị a:
1. Download na wụnye iTunes na gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa ma ọ bụrụ na ị na-ama na-adịghị na ya. Chere maka echichi mezue na-agba ọsọ iTunes.
2. Jikọọ gị iPhone gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa.
3. Mgbe iTunes ebupụta, pịa "iPhone" wee pịa "Info" ma họrọ "Outlook". Jide n'aka na "mmekọrịta Ndi ana-akpo" nhọrọ na-nyeere, bụrụ na ọ bụghị, nnọọ pịa ya kwekọrọ ekwekọ checkbox aka ya.
4. Site nhọrọ na-egosi, họrọ chọrọ kọntaktị nyefee na pịa "Mee".
5. All akaụntụ si iPhone ga-agafere gị Outlook akaụntụ. Ugbu a ị nanị mkpa melite gị Outlook akaụntụ na gị Windows ekwentị na ị ga-ọma na-aga!
Iji nyefee ozi:
N'ụzọ dị mwute, e nweghị kpọmkwem ụzọ eziga gị iPhone ozi gị windows ekwentị. E nwere ọtụtụ nke na-akwụ ụgwọ ọzọ apps Otú ọ dị, nke pụrụ inyere gị na usoro ma ọbụna na ha nwere oké mmachi; ha na-nyefee gị ozi gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa n'ụdị PDFs ma ọ bụ CSV faịlụ. Ọbụna iTunes ndabere naanị ahapụ gị ike a .mdd faịlụ nke ozi na ike ga-nanị anya na gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa, na-eji notepad.
Iji nyefee Photos:
Ihe kacha usoro iji aka nyefee photos n'etiti gị iPhone na windows ekwentị bụ site mbụ na-edegharị ha gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa na mgbe ahụ na-edegharị foto ndị a si na laptọọpụ / kọmputa ka windows ekwentị.
1. Nanị-ejikọ gị na iPhone gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Site Windows Explorer, chọta gị iPhone na họrọ niile foto site na ma na ịpị Ctrl + a ma ọ bụ site na-ejide ala Mgbanwe isi mgbe ahọpụta onye photos.
2. Ozugbo niile chọrọ photos e họrọ, nri pịa ma họrọ "Copy" ma ọ bụ "Bee" dị ka kwa gị chọrọ. Gaa chọrọ na ọnọdụ gị laptọọpụ ma ọ bụ na kọmputa, na nri click; si menu na-egosi họrọ "Tapawa". Chere maka niile foto na-agafere.
3. Ugbu a itinye gị windows ekwentị na otu laptọọpụ / kọmputa. Gaa ebe ebe niile foto na-agafere bụ ugbu ma họrọ ha site na ịpị Ctrl a. Chọta gị windows ekwentị n'iji nchọgharị faịlụ na mado foto ke chọrọ nchekwa site na nanị na-aga n'ime na ọnọdụ na ịpị Ctrl + v.
4. All gị phots ga-abụ dị na gị windows ekwentị na pụrụ anya ụdị e ozugbo.
Iji nyefee Music:
1. Download Windows Phone ngwa si ebe a
2. Wụnye Windows ekwentị ngwa gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa.
3. Mgbe-emecha echichi ẹkedori ngwa na-aga Settings mmekọrịta music, videos na ndị ọzọ from iTunes.
4. Ugbu a ka mmekọrịta a nile music gị windows ekwentị, na-aga PC Egwu. Lelee "mmekọrịta Music" nhọrọ.
5. ka mmekọrịta niile music na ị dị nnọọ enyefere gị iTunes, họrọ "mmekọrịta niile music" na pịa "mmekọrịta".
6. Ka idetuo họrọ music naanị, Otú ọ dị, họrọ naanị albums ma ọ bụ listi ọkpụkpọ na ị chọrọ nyefee gị windows ekwentị.
Iji nyefee Kalinda:
1. Launch iTunes na gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa mgbe gị iPhone na jikọọ na ya.
2. Họrọ "iPhone" site iTunes, si "Info" taabụ, ego "mmekọrịta Kalinda na" na pịa "Outlook".
3. Họrọ kalenda na ị chọrọ nyefee ekwentị gị na pịa "Mee".
4. kalenda gị ga-agafere gị Outlook akaụntụ. Mgbe ọ bụla ị melite gị Outlook akaụntụ gị windows ekwentị, ị ga-ahụ na kalenda na ekwentị gị ozugbo.
A otutu ntuziaka oru chọrọ, a otutu oge aka
Ọ dịghị ụzọ nyefee ozi
Method 2: Iji Wondershare Mobiletrans
Otú nyefee Photos, Videos, Music faịlụ site na iPhone ka WinPhone.
Nzọụkwụ 1: Open Wondershare Mobiletrans na kọmputa gị na jikọọ na iPhone na WinPhone na kọmputa. Mobiletrans ga recogize ma ngwaọrụ na sekọnd ole na ole.
Nzọụkwụ 2: Wondershare Mobiletrans pụrụ ịkwado nyefee Photos, Videos, Music faịlụ kpọmkwem site iPhone ka WinPhone. Họrọ faịlụ na ụdị mkpa ka ị nyefee na pịa Malite Nyefee. The faịlụ ga-agafere lekwasịrị ekwentị na a nkeji ole na ole. Biko Akwụpụla ma ngwaọrụ n'oge usoro.
Method 3: Iji SHAREit App
SHAREit ngwa bụ a free ngwá ọrụ dị na ma ndị windows Play ụlọ ahịa na iTunes. Ọ na-ahapụ gị nyefee gị photos, videos, music na kọntaktị gị iPhone gị windows ekwentị na Anglịkan. All ọ chọrọ bụ ifịk Wi-Fi njikọ na ọ na-ewe elekọta ndị fọdụrụ nke usoro maka ị.
Malite iji SHAREit nyefee data gị iPhone gị windows ekwentị, eso ndị a:
1. Download SHAREit n'ihi na gị iPhone si
2. Download SHAREit maka yout windows ekwentị site.
3. Jikọọ ma ngwaọrụ gị ka a nkịtị Wi-Fi netwọk, n'ụlọ gị gị na netwọk maka ihe atụ. Ẹkedori SHAREit na abụọ n'ime ha.
4. Họrọ "Send" nhọrọ si isi ihuenyo nke ngwa na gị iPhone na "Anata" site na isi ákwà ngebichi nke ngwa gị windows ekwentị.
5. Họrọ faịlụ na ị chọrọ nyefee gị iPhone gị windows ekwentị na kụrụ "Nyefee". Megharịa Nzọụkwụ 4 Ka ịhọrọ ihe data na na-na na-ezipụ ya!
Mfe iji, free, na-ahapụ ị na-eziga data na elu na-agba na-enweghị imikpu onwe ntuziaka oru. Mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọ bụ egwu; mgbe ọ na-adịghị arụ ọrụ, ọ dịghị ihe mere na-agbalị ya ọzọ.
Ọ dịghị ọrụ nyefee ozi ma ọ bụ kalenda.
> Resource> Windows> Olee ka ịgbanwee Data si iPhone ka Windows Phone